Natsiridza yako yekutarisa skrini ne f.lux | Linux Vakapindwa muropa
Simbisa yako yekutarisa skrini ne f.lux
Vhiki rapera takaona mabudiro maviri matsva emaviri ekuparadzirwa kweGnu / Linux akabuda, mumavhiki anotevera tichaona mamwe mavhezheni matsva anozoita zvinopfuura kamwe chete kudzima uye kumisikidza sisitimu yekushandisa zvakare, chiitiko chakaringana kuyedza software inotevera inozovandudza kwete chete timu yedu asiwo mashandiro edu pairi.
F.Lux chirongwa / chinyorwa icho gadzirisa kupenya kwetiraki maererano nenzvimbo nenzvimbo yenguva yatinayo nenzira yekuti kuneta kunokonzerwa nekupenya kunogara kusipo kana kushoma. Iyi script, inova chirongwa, yakaberekerwa nyika yeGnu / Linux uye iri kuwedzera zvishoma nezvishoma kune mamwe mapuratifomu akadai seWindows kana MacOS.
Kuisirwa kuri nyore uye kunyangwe iwo script aripo kuti amhanye pane chero kugoverwa, ivo vanogadzira vanokurudzira kushandisa distros nemapadhi mapakeji. Nekudaro, sampuro yayo distro ndiUbuntu, kunyange inogona kunge ichishanda kune Linux Mint, Fedora, Debian, nezvimwe…. chero munhu akakosha. Kugona kuzviita kuburikidza neyekuchengetera, iyo yekumisikidza yaizoitwa nekuvhura terminal uye typing zvinotevera:
Kana f.lux yaiswa chete, tinozviita uye dialog ichaonekwa kwatinofanira kuisa latitude uye kukwirira kwenzvimbo yedu, data ratingawana nekutenda kuGoogle Mepu. Kana tangopinza iyi data, tinoichengeta uye kupenya kunozogadziridza kune yedu nguva zone nenzvimbo. Asi f.lux haimhanye otomatiki saka tichafanirwa kuiisa muzvirongwa zvekutanga kuitira kuti pese patinovhura system, f.lux inomhanya, asi mushure mekudzima iyo pc, f.lux inomira kushandisa tarisisa uye hatizo cherechedze ma efects avo.
F.Lux ichaita yedu yekutarisisa kutarisira hutano hwemaziso edu
F.lux ndeimwe yeaya mapurogiramu akakodzera kuve pakomputa yedu uye musystem yedu kubva pamutengo mudiki we0 euros, tinogona kuva nemonitor inokodzera hutano hwemaziso edu uye tisingagadzirise, kungoisa chirongwa chidiki. Kana iwe uchiri nekukahadzika, iwe unogona chete kuita chinhu chimwe, chiedze mumuchina chaiwo uye iwe uchaona kuti zvinokugutsa sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Simbisa yako yekutarisa skrini ne f.lux
Microsoft yakaendesa: inotangisa .NET Core uye Visual Studio Code yeLinux
Parrot OS: kumwe kukwikwidzana kweKali GNU / Linux